Magaalada Malaa'igta ee hoos timaad COVID-19 ayaa mar saddexaad koray
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Magaalada Malaa'igta ee hoos timaad COVID-19 ayaa mar saddexaad koray
Jebinta Wararka Safarka • News • Technology • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Bangkok, Dejinta Oriental.
Magaaladiina ma oga waxa ay magaaladu helayso.
The creme de la creme ee adduunka chess in show leh wax walba laakiin Yul Brynner
Waqtigu wuu duulayaa uma muuqdo daqiiqad
Maaddaama spa Tirolean ay ku jireen wiilasha chess-ka.
Dhammaan isbeddellada ma ogid in marka aad
Ku ciyaar heerkaan ma jiro goob caadi ah.
Waa Iceland ama Filibiin ama Hastings ama meeshan!
Hal habeen Bangkok iyo adduunyada lo'daada.
Tani way soo laaban doontaa, laakiin inta ka horaysa, Bangkok mar labaad ayaa la xirayaa, iyada oo ay ugu wacan tahay mowjadda saddexaad ee COVID-19.
Tallaabooyin adag, oo ay ka mid tahay bandow, ayaa lagu soo rogi doonaa Bangkok iyo shan gobol oo ku dhow muddo laba toddobaad ah laga bilaabo Isniinta iyada oo ay xukuumaddu isku dayayso in ay xakameyso tirada sii kordheysa ee cudurka cusub ee 'Covid-19'.
Bandow 9-ka ilaa 4-ta galabnimo ayaa lagu soo rogi doonaa afarta gobal ee ugu hooseeya Narathiwat, Pattani, Songkhla iyo Yala.
Xeerarka adag ayaa loo diyaarin doonaa Greater Bangkok, oo ay ku jiraan caasimada iyo shanta gobol ee deriska la ah Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Samut Prakan iyo Samut Sakhon.
Kaliya laba toddobaad warshadaha safarka iyo dalxiiska ee Thailand oo ay ku jiraan Bangkok, oo loo yaqaan Magaalada The Angeles waxay lahayd wax yar oo rajo ah wax ka yar 2 toddobaad ka hor markii a Liiska waxa dib uga furmay Bangkok ayaa si muuqata loogu dhawaaqay. Laba toddobaad ka hor noocyo badan oo goobo iyo ganacsiyo ah oo ku yaal Bangkok ayaa loo oggolaaday inay dib u bilaabaan howlahooda bilaabmaya Juun 22, 2021.
Maanta tani taariikh dheer ayey dhacday markii Xarunta Maamulka Covid-19 Xaaladda Maamulka (CCSA) ay ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo lagu soo rogayo Greater Bangkok oo ay ka mid tahay xiritaanka dukaamada waaweyn Supermarket-ka ayaa loo oggolaan doonaa inuu furnaado illaa 8-da fiidnimo, hase yeeshee.
Shuruucda cusub ee ku saabsan waxa ka furan ama ka xidhan Bangkok waxay tilmaamayaan:
Dhammaan goobaha laga cunteeyo ayaa la xidhayaa 8-da fiidnimo.
Ka shaqee guriga oo lagu dhiirigaliyo dhammaan ganacsiyada.
Si adag u dhaqan galinta tilaabooyinka fogeynta bulshada.
Ma jiro adeegyo gaadiid dadweyne laga bilaabo 9ka fiidnimo ilaa 3da subaxnimo
Xiritaanka jardiinooyinka dadweynaha 9ka fiidnimo.
Xiritaanka dhammaan meheradaha halista u ah infekshinka sida meelaha lagu qurxiyo, meelaha lagu dabbaasho iyo meelaha duugista ah ee duugista.
Ma jiraan kulanno ka badan shan qof, marka laga reebo howlaha diimeed.
Dukaamada raaxada iyo suuqyada habeenkii waxay xirnaayeen 8-da fiidnimo ilaa 4-ta galabnimo.
Isbaarooyin ayaa laga dhisayaa laga bilaabo Sabtida dhamaan gobolada si looga niyad jebiyo dadka inay safraan.
Seddexaad COVID-19 oo kordhay ayaa hadda weeraraya Thai Capita ee Bangkok markii ay timid imaatinka Delta Delta markii ugu horeysay ee laga helo Hindiya. Kiisas cusub ayaa sidoo kale ku kordhay afarta gobol ee koonfurta. Koonfurta Thailand, nooca Beta waa sababta. Kala duwanaanshaha Beta waxaa loo yaqaannaa culeyska Koonfur Afrika
Thailand ayaa gashay meel sare oo ay ku dhinteen 75 Arbacadii iyo tirada labaad ee ugu badan ee infekshannada cusub, oo ah 9,276, Khamiista. Tirada ugu badan ee cudurka maalin kasta qaado waxay ahayd 9,635 Maajo 17. Maanta 75 qof ayaa ugu dhintey Thailand COVID-19.
Thailand waxaa ku nool ku dhowaad 70 milyan oo qof. Thailand ayaa kaalinta 77 kaga jirta aduunka iyadoo 4670 kiis malaayiin dad ah laga helay tan iyo markii la helay viruska. Marka la barbardhigo Mareykanka ayaa 104,244 halkii milyanba wuxuu leeyahay booska murugada leh ee 13aad ee adduunka ugu sarreeya.
Tirada dhimashada, Thailand waa kaliya 166 iyadoo 38 qof ay dhinteen halkii milyan. Dalka Mareykanka ayaa kaalinta 21-aad kaga jira adduunka iyadoo 1870-kii milyanba ay dhinteen.
Waxa kale oo jira sariiro la’aan daran iyada oo bukaanno badan ay muddo dheer kujiraan cisbitaalada isla markaana ay sii yaraanayaan heerka ka bixitaanku. In ka badan 700 oo qof ayaa saaran qalabka hawada ku shaqeeya.
Raiisel wasaare Prayut Chan-o-cha, oo shir gudoomiyay shirkii CCSA jimcihii, ayaa lagu soo waramayaa inuu faray mas'uuliyiinta inay hoos u dhigaan infekshannada cusub inta lagu gudajiray xilligii nus-qabqabashada wuxuuna sheegay in dhammaan tillaabooyinka lagula dagaallamayo dillaaca ay la jaan qaadi doonaan si ay si wanaagsan ula qabsadaan faafidda fayraska degdegga ah .
Ra'iisul wasaaruhu wuxuu kaloo go'aansaday in la dhimo mushaarka saddexda bilood ah si loo badbaadiyo lacagaha miisaaniyadda gobolka ee lagula dagaallamayo aafada. Wasiiro kale oo ka tirsan xukuumadda ayaa markaa raacay.
Gen Prayut wuxuu qaataa 125,590 baht bishii, mushaharka 75,900 baht iyo gunnada boos ee 50,000 baht. Ma helo wax mushahar ah wasiirka gaashaandhigga. Xubin ka tirsan golaha wasiirada ayaa loo oggol yahay inuu ka helo mushahar hal boos oo keliya, kan ugu mushaharka badan.
Ku xaddididda xiritaanka gobollada la soo xulay waxaa doorbiday hoggaamiyeyaasha ganacsatada si loo yareeyo dhaawaca dhaqaale.
Bangkok waxay noqon doontaa magaalada malaa'igta markale Hal habeen oo ka mid ah Bangkok waxay ka dhigeysaa nin adag inuu markale is-hoosaysiiyo.